MARVEL Strike Force (Myanmar) - Codashop | Codashop
MARVEL Strike Force အတွက် Power Cores များကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဝယ်ယူလိုက်ပါ! သင်၏ MARVEL Strike Force User ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Power Coresပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ MARVEL Strike Forceအကောင့်အတွင်း ဝယ်ယူထားသည့် Power Cores ချက်ချင်းဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် MPT, Telenor, Ooredoo, KBZPay, Onepay, easyPoints, Visa & Mastercard စတာတွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
အခုပဲ MARVEL Strike Force ကို Download ဆွဲပြီး ကစားလိုက်ပါ!
1ကစားသမား ID ကိုထည့်သွင်းပါ
သင်၏ Player ID ကိုရှာဖွေရန်အတွက် Application တွင်သင်၏အကောင့်သို့ Login ဝင်ပါ။ မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ avatar ကိုနှိပ်ပါ။ သင့် Player ID ကိုသင့် Username အောက်တွင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ Player ID ကိုဒီမှာထည့်ပါ။
150 Power Cores
375 Power Cores
750 Power Cores
1580 Power Cores
4130 Power Cores
8630 Power Cores
MARVEL Strike Force အတွက် Power Cores များကို Codashopမှာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ
MARVEL Strike Force အတွက် Power Cores များကို ဝယ်ယူဖို့ စက္ကန့်ပိုင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ Codashop ကိုအသုံးပြုရတာလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှာမှာရှိတဲ့ ဂိမ်းကစားသူတွေရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံးရောင်းချသူတစ်ယောက်အဖြစ်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလို ၊ စာရင်းသွင်းစရာမလို ၊ Login ဝင်စရာမလိုတာကြောင့် အခုပဲ Power Cores ဝယ်ယူဖို့ ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်။
MARVEL Strike Force အကြောင်း-
MARVEL Strike Force တွင်၊ သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အတွက်အမြင်အာရုံ - ရင်ခုန်စရာကောင်းသောကစားစရာဂိမ်းတွင်ပါ ၀င်သောမဟာမိတ်များ၊ ပြိုင်ဘက်များနှင့်အတူစစ်တိုက်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်ခဲ့ပြီး Super Hero နှင့် Super Villain များက ကမ္ဘာမြေကြီးကိုကာကွယ်ရန်အတူတကွလုပ်ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေကြသည်။ Doctor Strange, Loki, Venom, Spider-Man, Captain America, Iron Man နှင့်အခြား MARVEL Hero များအပါအ၀င်စုဝေးပြီးအင်အားဖြည့်ပါ။
စကြဝဠာကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် အင်အားကြီးမားသော MARVEL Super Hero နှင့် Super Villains များကို သင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ Super Heroes နဲ့ Super Villains ကိုအရင်ဝတ်ဆုံဆင်ပြီးအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
သင်ဘယ်သူနှင့်တိုက်ခိုက်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ Super Heroes များနှင့် Super Villain တို့ကိုပူးတွဲပြီးရန်သူများကိုထုတ်ယူရန် combo ရွေ့လျားမှုများဖေါ်ပြလိုက်ပါ။5v5 တိုက်ပွဲများတွင်ကျွမ်းကျင်သောတိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာသည် MARVEL Universe ၏အကြီးမြတ်ဆုံးလူဆိုးများကိုအနိုင်ယူရန်သင့်အဆွက်စွမ်းအားဖြစ်သည်။
အချားဂိမ်းတွေနဲ့မတူတဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုခံစားပြီးကစားလိုက်ပါ။ သင်၏ MARVEL Super Heroes များနှင့် Super Villains များသည်သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်အသက်ဝင်သလိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စျေးကွက်နှင့်မိတ်ဖက်များ Game ထုတ်လုပ်သူများအတွက် စည်းမျဉ်းဥပဒေများ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု မူဝါဒ